१५ जनाको ज्यान लिने, ‘ध्रुवे’ हात्तीको अनौठो प्रेम !  Clickmandu
१५ जनाको ज्यान लिने, ‘ध्रुवे’ हात्तीको अनौठो प्रेम !
रासस २०७५ वैशाख २ गते १८:२२ मा प्रकाशित
तस्विर राससको सहयोगमा
सोही क्षेत्रमा पर्यटक घुमाउन सौराहाबाट शनिबार पुग्नु भएका जीपका चालक गौरीराम विश्वकर्मालाई ध्रुवे हात्तीले लखेटेको थियो । उनले भने ‘हामीलाई ध्रुवेले लखेटेपछि भागेर बच्यौँ । बाटोको छेउछेउ गाडीको पिछा गरेको थियो ।’